EFOI, FEEM, Rida : hasongadina ny vokatra azo ahodina | NewsMada
Voarohorohy ho mpamatsy fitaovam-piadina ny dahalo…: Apostoly 150 mitaky ny hamoahana ny namany ...février 25, 2021
Tentatives de déstabilisation: L’Emmo-Far se félicite de la réaction des Tananariviens ...février 25, 2021
Halatra fiara “minibus” narahina vonoan’olona: miaramila kaporaly iray no nitetika antsy ilay mpamily
Appel à la violence: un membre du RMDM Diaspora dans le collimateur de la justice
Fandrobana faobe tao Toliara: 50 voasambotra, iray naratra voatifitra, roa hafa naratra mafy
Déstabilisation: les forces de sécurité restent aux aguets
Nitohy ny savorovoro tao amin’ny oniversite Manindany: nirefotra ny lakrimozenina, olona roa voasambotra
Manifestation interdite à Ambohijatovo: risque imminent d’arrestation
Oniversiten’i Maninday – Fitakiana vatsim-pianarana: nifamono ny samy mpianatra noho ny tsy fitovian-kevitra
Issa Sanogo du Système des Nations Unies: «Il faut préserver la stabilité»
Voarohirohy ho mpamatsy fitaovam-piadiana ny dahalo: Apostoly 150 mitaky ny hamoahana ny namany
Tentatives de déstabilisation :l’Emmo-Far se félicite de la réaction des Tananariviens
EFOI, FEEM, Rida : hasongadina ny vokatra azo ahodina
Par Taratra sur 16/05/2017
Nisokatra omaly ary hifarana amin’ny asabotsy izao ny fihaonambe iraisam-pirenena momba ny zavaboahary andiany voalohany, hatao eto Antananarivo. Iarahana amin’ny fikambanan’ny vehivavy mpandraharaha aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina (EFOI) sy ny fikambanam-behivavy mpandraharaha amin’ny sehatry ny tontolo iainana any mahajanga (FEEM) ary ny tambajotra iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ny asa tanana (Rida) ny hetsika.
Lohahevitra voizina mandritra ny enina andro ny momba ny loko voajanahary sy ireo zavamaniry ary akora fototra azo havaozina mifanaraka amin’ny fikajiana ny tontolo iainana.
Mahatratra 65 ireo manam-pahaizana avy eto an-toerana sy avy amin’ny firenena 24 hafa mifanakalo hevitra momba ny fampiroboroboana ny loko voajanahary.
Eo koa ireo mpanao asa tanana 50 avy amin’ny faritra 22 eto Madagasikara sy avy amin’ny firenena 12 hafa ao anatin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina.
Kendrena amin’ity fihaonambe ity ny fivelarana eo amin’ireo mpanao asa tanana mifototra amin’ny akora voajanahary sady mikendry ny fiarovana ny tontolo iainana. Eo koa ireo mpanao fikarohana sy mpianatra ary indrindra ireo mpanodina lohamenaka. Ankoatra izany ireo mpanamboatra fanafody amin’ny alalan’ny zavamaniry….
Raha ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro, hisy ny adihevitra ara-tsiantifika isa-maraina hatao etsy amin’ny IFM Analakely sy etsy amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy. Atrikasa fanehoana ny fahaiza-manao kosa ny hariva. Misokatra ho an’ny daholobe kosa ny varotra fampirantiana.
Hitohy any Mahajanga ny hetsika manomboka ny 21 mey hatramin’ny 27 mey izao. Hisy ny fitsirihana ny ala any Boeny toy ny ao Ankarafantsika sy ny eny amin’ny ala honko betsiboka iarahana amin’ny vondron’ny mpanao asa tanàna any an-toerana.
Volley-Afrika: « Mandeha hatrany ny kotrana », hoy ny mpanazatra 02/03/2021
Kick Boxing: hanatanteraka fivoriambe amin’ny 27 marsa 02/03/2021
Atletisma: tsy mbola afaka mamonjy an’i Maorisy i Todisoa 02/03/2021
SG Madagasikara: mitroka CO2 3,9 t/taona ny hazo voavoly 02/03/2021
Fanatsarana ny famokarana: miditra amin’ny teknolojia niomerika ny tantsaha 02/03/2021
Tselatra: Distrikan’i Bealanana
HITSY TORAKA: aza atao mitanila
Hitafy ny fanamiana Macron ny Barea
Fantina sy fintina